Ụdị Akpa aka, Akpụkpọ ụkwụ : Nkwalite (-55%)
Ị na-achọ inweta onyinye bara ụba na nke dị ukwuu nke ụdị ihe ndị kachasị ewu ewu na ndị na-emepụta ihe?
N'oge a ndị mmadụ na-elebara anya ọ bụghị naanị na ọdịdị ha, ma karịa ihe ndị ọzọ nile, na-ele anya. Ọtụtụ ndị mmadụ maara ụdị uwe ha na-azụta nakwa ụdị uwe ha na-eyi n'amaghị ama ma ọ bụ ọrụ, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ nzukọ azụmahịa. Iji mezuo atụmanya nke ndị ahịa anyị bụ ndị chọrọ iyi uwe na-ewu ewu, uwe mara mma sitere na ụdị ụwa nile, anyị ekepụtawo ụlọ ahịa nke oge a na ihe eji eme ihe.
Ị nwere ike ịchọta ya ụdị akpụkpọ ụkwụ, uwe na akpa, ma onyinye anyị dị nnọọ ukwuu. Anyị na-enyekwa ihe mgbakwunye ejiji, ihe ndị e ji edozi na ọla ntị; ihe niile eji mara mma, nke mara mma na ha na-esi n'ime ihe kachasị mma. Ịtụle ihe ndị dị elu nke ndị a tụrụ anya na-enye anyị ohere ire naanị ngwaahịa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ma nwalee, nke na-adịghị enye ndị mbụ aka, ma e wezụga nke ahụ, ha bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụzọ anyị ma chọọ ịga ụlọ ahịa ọkachamara na nke a ma ama na ejiji akpụkpọ ụkwụ, uwe ma ọ bụ ihe ịchọ mma, anyị na - akpọ gị ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị https://get2lux.cn/en/
Maka ụfọdụ ha enweghị ike ịdị adị, ebe ndị ọzọ na-echeghị ịhapụ ụlọ na-enweghị ha, karịchaa na ihu igwe. Anya ugogbe anya bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị mkpa anyị na-eyi - nke dị nso na wallets ma ọ bụ ọla. Anyị kpebiri ịpụta megide atụmanya nke ọtụtụ puku okporo osisi ma mepụta ụlọ ahịa na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ nke ụdị ndị a maara, bụ Ray Ban, Versace na Gucci.
Ihe eji eme ihe dika ihe ndi ozo site na mmalite - banyere ihe anya, ebe di iche iche di iche iche, tinyere ihe ndi ozo, ya mere ndi di iche na ihe ndi eji eji ha eme ihe. Ọ bụ ya mere, mgbe ị na-azụ ihe ndị na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke, ma ọ bụ Prada, Louis Vuitoon, ma ọ bụ Chloe, ị na-enweta ngwaahịa na nke mbụ na akụkụ ọ bụla. Naanị otu ọdịiche - ọ dị ọnụ ala, dị mfe, ma dị mfe na obere akpa na ikike nke onye ọrụ Polish.
Na onyinye nke ụlọ ahịa anyị, ị nwere ike ịchọta, n'etiti ndị ọzọ, ezigbo ewu ewu Bvlgari oyiri, ụdị si LV ma ọ bụ Celine
A maara akpa ahụ maka ịbụ ihe dị mkpa maka ụmụ nwanyị ebe ọ dịkarịa ala narị afọ nke ise BC. Taa, ihe karịrị puku afọ abụọ na narị ise mgbe e mesịrị, ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa. Otú ọ dị, ndị inyom, ọ bụghị nanị na-ebu akpa ego, kamakwa ruru maka ihe ndị e ji emepụta akpa aka site n'aka ndị a ma ama na ndị na-emepụta ihe na gburugburu ụwa. Ihe kpatara ya doro anya: ọnụ ala dị ala maka oke nha.
Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị inyom Polish na-abịa site na ndị na-emepụta ihe dị ka Louis Vuitton, Burberry na YLS, ma Christian Louboutin replicas, ụdị Diore na Chloe nwekwara mmasị dị ukwuu. Ndi nwanyi Polish choro icho uzo ndi a na-ewu ewu na United States ma obu gosiputa ekele site n'oru ndi kpakpando hollywood, ndi egwu egwuregwu na ndi ozo. Onyinye anyị na-agụnyekwa ndị na-emepụta ego ndị ọzọ; ọ na-agụnye ụdị si Hamis, Gucci, Prada, Chanel, Celine, na n'oge na-adịbeghị anya agbapụ nke Valentino handbag ejirila ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ụdị ndị ọzọ, biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị https://get2lux.cn/en/119-handbags Ọ gaghị adị mfe ịzụta obere akpa, nke ga-eme ka ọ bụrụ ihe onwunwe, ihe pụrụ iche, ọdịdị pụrụ iche na, n'otu oge ahụ, ọnụ ahịa dị ọnụ ala. A pụrụ ịchọta atụmatụ ndị a n'ime obere akpa ejiji nke ụdị ndị a ma ama anyị na-enye na ụlọ ahịa anyị. Ihe oyiri n'adịghị iche na nke mbụ; ma ha na-egbutu, na-acha uhie uhie, nha, nakwa ihe ndị pụrụ iche, ha na-edegara onye ha na ha na-achọpụta na ọmarịcha boutiques. Ọ dịghịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ oyiri nke Louis Vuitton, Chanel ma ọ bụ Celine obere akpa - onye ọ bụla n'ime ha na-ama ọdịdị dị elu site na elu àgwà nke ihe ọ na-eme na nkwa nke afọ ojuju anyị n'akụkụ. Ihe eji eme ihe bu echiche zuru oke maka ugwo ego, ma obu onyinye magburu onwe ya nye onye isi ma obu ndi otu ibe gi, ma n'otu aka ahu na-aruzu oru ha di otutu otutu afo n'aga n'iru. Onyinye anyị dị oke oke: o nwere ma ọ bụ Gucci obere akpa ejiji na ụdị si Burberry, YSL na ihe ndị a ma ama nke Christian Louboutin.
Ọ gaghị adị mfe ịzụta obere akpa, nke ga-eme ka ọ bụrụ ihe onwunwe, ihe pụrụ iche, ọdịdị pụrụ iche na, n'otu oge ahụ, ọnụ ahịa dị ọnụ ala. A pụrụ ịchọta atụmatụ ndị a n'ime obere akpa ejiji nke ụdị ndị a ma ama anyị na-enye na ụlọ ahịa anyị.
Ihe oyiri n'adịghị iche na nke mbụ; ma ha na-egbutu, na-acha uhie uhie, nha, nakwa ihe ndị pụrụ iche, ha na-edegara onye ha na ha na-achọpụta na ọmarịcha boutiques. Ọ dịghịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ oyiri nke Louis Vuitton, Chanel ma ọ bụ Celine obere akpa - onye ọ bụla n'ime ha na-ama ọdịdị dị elu site na elu àgwà nke ihe ọ na-eme na nkwa nke afọ ojuju anyị n'akụkụ. Ihe eji eme ihe bu echiche zuru oke maka ugwo ego, ma obu onyinye magburu onwe ya nye onye isi ma obu ndi otu ibe gi, ma n'otu aka ahu na-aruzu oru ha di otutu otutu afo n'aga n'iru.
Onyinye anyị dị oke oke: o nwere ma ọ bụ Gucci obere akpa ejiji na ụdị si Burberry, YSL na ihe ndị a ma ama nke Christian Louboutin.
Ọ bụrụ na ọ dịla mgbe ị rọrọ na ị na-eyi akpụkpọ ụkwụ mara mma ma mara mma nke ndị mmadụ a ma ama, ndị kpakpando na ndị mara mma si n'akụkụ ụwa dum, ma n'otu oge ahụ anaghị aga ahịa mgbe ị na-azụ akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ, mgbe ahụ ụlọ ahịa anyị bụ ngwọta kasị mma maka nchegbu gị . Ihe oyiri nke Louis vuitton, Gucci, Dior, Yeezy, Converse Coca & Cola, Church's, Christian Louboutin na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ bụ ihe ndabere nke ihe nnọchiteanya anyị, nke ndị ọzọ na-emepụta niche jikọtara ya.
Kwa akpụkpọ ụkwụ YLS, nke a na-ere na ụlọ ahịa ahụ, akpụkpọ ụkwụ Isabel Marant ma ọ bụ Hamis bụ ndị a họọrọ ahọpụtara nke ọma site na nnakọta ụwa dị na ahịa; ụdị ndị a ma ama, ndị na-ewu ewu na ndị a na-ewu ewu na ndị na-akwado nkwado gburugburu ụwa nakwa na ha kwesịrị idetuo ya na uwe ọ bụla nke Pole oge a.
Lelee ụlọ ahịa anyị na akpụkpọ ụkwụ Dior, Chanel na Gucci akpụkpọ ụkwụ na https://get2lux.cn/en/113-beots njikọ - anyị na-ekwe nkwa ahịa mara mma, nnyefe ngwa ngwa na ikpochapụ ọnọdụ nke azụmahịa ahụ. Ịzụta akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ bụ ohere pụrụ iche maka ndị chọrọ ileba anya na nke oge a, na n'otu oge ahụ na-enwe ekele maka nkasi obi nke ije ije na nkwanye ùgwù nke akpụkpọ ụkwụ na-enweta site na nkwonkwo kacha mma.
njikọ - anyị na-ekwe nkwa ahịa mara mma, nnyefe ngwa ngwa na ikpochapụ ọnọdụ nke azụmahịa ahụ. Ịzụta akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ bụ ohere pụrụ iche maka ndị chọrọ ileba anya na nke oge a, na n'otu oge ahụ na-enwe ekele maka nkasi obi nke ije ije na nkwanye ùgwù nke akpụkpọ ụkwụ na-enweta site na nkwonkwo kacha mma.
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta ihe eji akwa ákwà, ọ maara nke ọma ụdị ụdị ejiji na ndị na-emepụta ihe n'oge a, nke n'ime ha "eyi" na uwe ha ka mma ịkwụsị maka oge ka mma. Ngwaahịa anyị na-enye bụ ihe eji eme ihe, oge a na n'usoro na ọnọdụ ndị dị ugbu a. Ndị a bụ isi ụdị dịka Gucci oyiri, Chanel, Dolce & Gabbana, Hamis na YSL, ọ bụ ezie na onyinye zuru ezu na-aga n'ihu ma na-agụnye uwe nke ndị na-emepụtaghị ndị a ma ama.
Mgbe ịzụtara ihe ejiji akwa site n'aka onye na-ebu ihe a tụkwasịrị obi, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ngwaahịa a nwalere, kwenye na nke ahụ sitere na isi iwu nke na-adịghị emerụ ọdịmma nke onye nrụpụtara mbụ. Uwe ndị dị na ntanye anyị bụ ntụgharị nke Chanel, Burberry ma ọ bụ Balenciaga bụ naanị ụdị ngwaahịa ndị a: ọ bụghị nanị na ha dị oke mma, ha abụghị nanị na-adịgide adịgide, kama ha na-agba akaebe na ụdị na onye nwe ha. Nke a bụ ụzọ zuru oke maka ego ndị dị oké ọnụ, ọ bụghị nanị na ọ naghị enwe ike ịbanye n'akpa uwe a, mana ọ na-adịkarịghị achọta na Polish ahịa na ụlọ ahịa Polish.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara inye uwe eji eme akwa, biko gaa na
Onyonye dị iche iche nke onyinye ndị dị na ahịa ọla ahịa na-eme ka nhọrọ dị n'etiti ụdị dị iche iche dị mfe, ma ọ bụrụ na anyị maara ihe anyị na-achọ na ụdị ụdị ntị ma ọ bụ mgbanaka anyị chọrọ iyi. N'oge na-adịbeghị anya, na Poland, ihe ndị e ji mara mma nke ụdị ndị a ma ama, bụ ndị a maara aha ha dị ka Chanel, Dior, Tiffany ma ọ bụ Louis Vuitton aghọwo ndị ejiji.
Nke ahụ bụ ụdị ụdị ihe ị ga-ahụ na ụlọ ahịa anyị - naanị, nke oge a, mara mma, yana ihe dị oké ọnụ ahịa maka ọnụ ahịa ego. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na oyiri chanel ị zụtara ga-ejere gị ozi ruo ọtụtụ iri afọ, agaghị emerụ ya, ọ gaghị agba ọsọ, ọ ga-enwu kwa mgbe niile - họrọ onyinye anyị.
A na-enweta ya na nnukwu onyinye, ngwaahịa ọla edo nke Louis Vuitton, cartier ma ọ bụ Hamis bụ ngwaahịa nke klas kachasị elu, haziri na arụpụtara maka ndị na-eji ejiji ejiji, ọmarịcha anya na ùgwù nke ụdị ihe eji eme ihe n'oge azụmahịa ma ọ bụ nzukọ mmadụ, oge.
Echela oge ọzọ, lelee ụlọ ahịa anyị ugbu a
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-eji nlezianya elepụ anya na-elezi anya nke ọma na-elezi anya, ndị ka na-eji obi ụtọ na-eyi mgbanaka. Karịsịa ụdị ndị a maara site n'aka ndị na-ewu ewu na ndị a ma ama. Ịkwesighi ịzụta ndị mbụ iji nweta àgwà ha; ha na-ejikọta ya site na nlekere anya, ma ọ bụrụ na ha ejiri ihe ndị kwesịrị ekwesị na nchebe nke kachasị mma, ka ha ghara iche iche ihu site na ezigbo archetypes.
Ọ bụrụ na i lelee ụlọ ahịa anyị na-eche nche, ị ga-ahụ ntinye nhọrọ nke ọma na nke ọma nke nche maka onye ọ bụla, na maka oge ọ bụla. Ọnụ ahịa mara mma na-eme ka anyị nye ọnụahịa maka ndị ahịa niile, n'agbanyeghị oke ego ha ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ ha. Otu n'ime ahịa ndị kachasị mma na ndị kasị ewu ewu nke ndị ahịa na-azụta bụ ihe Emporio Armani, nke a na-ahụ anya site na nlebara anya ọbụna obere ntakịrị nkọwa mgbe ọ gwụrụ.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị mata ihe niile anyị nyere na https://get2lux.cn/en/127